Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » India na -agbasa ozi ọma » Delhi na-aga n'ihu mbelata ọnụ ọgụgụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ 5-Star
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Hotels & Ebe ntụrụndụ • India na -agbasa ozi ọma • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Otu ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke Northern India na-akatọ usoro ego ngwakọta nke ewepụtara na amụma excise ọhụrụ nke Delhi.
Ọtụtụ ndị otu ụlọ oriri na ọṅụṅụ ekwupụtala nchegbu ha maka mpụ ọhụrụ nke Delhi nke a ga-emejuputa na Nọvemba 17, 2021.
Usoro ego ọhụrụ a ga-emetụta ihe oyiyi Delhi yana ọnụ ọgụgụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ 5 dị ntakịrị.
Ọtụtụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-achọ ịkọwapụta ma ọ bụ mee ka ọkwa ha gbanwee ka ọ bụrụ kpakpando 4 n'ihi usoro ego ngwakọta nke ewepụtara ọhụrụ nke 1 crore kwa afọ.
Dị ka iwu excise ọhụrụ si dị, enwere oke nhata nke ụgwọ. Maka ụlọ oriri na ọṅụṅụ ruo ọkwa nke kpakpando abụọ, ego a bụ INR 10 lakh yana maka ụlọ oriri na ọṅụṅụ atọ na anọ, ọ bụ INR 15 lakh kwa ọnụ ahịa F&B. Ebe akwụkwọ ikike L-16 ọhụrụ (kpakpando 5 na karịa) bụ ikike mejupụtara INR 1 crore nke pụtara na ụlọ oriri na ọṅụṅụ nwere ọnụ ụlọ abụọ yana nke ọzọ nwere ebe isii ka a na-ana otu ụgwọ n'okpuru atụmatụ ngwakọta. A na-emeso Banquets na ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị iche iche na akwụkwọ ikike dị iche iche (L-38) na ụgwọ a na-anata na mpaghara kapeeti (Rs 5,00,000 ruo Rs 15,00,000/- bụkwa nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka ego). .
Iwu nke 24 × 7 ikikere maka ọrụ mmanya ka etinyekwara ma tinye ya n'ọrụ n'ime ego mejupụtara na-atụleghị mpaghara / mpaghara ma ọ bụ ọchịchọ nke ọrụ mmanya 24 × 7 na nhọrọ nke ngalaba ikike.
Otutu nnọchite anya ezipụla osote onye isi ala na-ahụ maka ego bụkwa onye isi. Nzukọ nke ndị otu na ndị nnọchi anya otu ahụ ezutela ngalaba Excise iji nyochaa amụma mana enweghị nzaghachi dị mma nke Renu Thaplial, Secretary General, HRANI kọrọ. Ọ dị mkpa ikwupụta na esiteghị na Ngalaba Excise tụrụpụta ma ọ bụ tinye ya n'akwụkwọ amụma mwepu ewepụtara maka nkwupụta sitere na ọha/ụlọ ọrụ Renu.
Atụmatụ ego mejupụtara nke a na-atụ aro ga-emetụta ụlọ oriri na ọṅụṅụ ndị nwere nha dị iche iche dị ka nkeji nwere ọnụ ọgụgụ dị oke ọnụ ga-esiri ike ịnweta ụgwọ nke ikike ahụ. Enwere nnukwu mmụba na ụgwọ ikike maka ngalaba niile Garish Oberoi, Onye isi oche, kọmitii steeti Delhi, HRANI kwuru.
"Ọ dị mma na gọọmentị Delhi butere ikike mejupụtara akwụkwọ ikike mana ụgwọ ndị ọzọ maka ọrụ ime ụlọ yana ụgwọ akwụkwọ ikike kwa afọ na oriri ruo Rs 15 lacs na-emebikwa ikike nke mejupụtara ya kpamkpam. Enweghị onye agbata obi steeti Delhi nwere nnukwu ụgwọ dị otú ahụ na mmejuputa ụgwọ ọrụ dị otú ahụ ga-eme ka azụmahịa na NCR na steeti ndị agbata obi gbakwunyere," Mr. Oberoi kwukwara.
Enweghị nkọwa doro anya na ịzụrụ mmanya ruo ụbọchị. Nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-eche ihe ịma aka ihu na ebe nrụọrụ weebụ ngalaba excise. Ụlọ ọrụ ahụ edoghị anya na ọrụ mmanya na ịzụ ahịa maka mmemme oriri na ọṅụṅụ ka oge agbamakwụkwọ na-aga n'ihu.
Ndị otu ụlọ oriri na ọṅụṅụ ahụ gwakwara ndị otu ahụ na dịka iwu a chọrọ, onye ọbịa nke na-azụ ahịa na-achọ ịṅụ mmanya na-aba n'anya na-arụ ọrụ / ihe omume ha ga-ewerekwa akwụkwọ ikike nwa oge nke Rs 50,000 / - gbakwunyere ma zụta. mmanya si n'ụlọ ahịa e kenyere ya pụtara na onye ọbịa ga-agbadata karịa maka ọrụ mmanya. Iwu dị otú ahụ ga-eduga n'ịgbanwe n'ihe omume oriri na ọṅụṅụ na mpụga Delhi.
Dịka iwu nke Delhi Govt Order No F.No 10 (39) ENV 2021/4941-4970 nke ụbọchị 13th Nọvemba, 2021, emechiri ụlọ ọrụ gọọmentị Delhi ruo 17.11.2021, yabụ enweghị ike ịchọ nkọwa n'aka ndị ọrụ gọọmentị site n'aka ndị ọrụ gọọmentị. ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Ekwesịrị ịgbatị ụbọchị nke Nọvemba 17, 2021 maka mmejuputa iwu otu ọnwa maka ụlọ oriri na ọṅụṅụ.
Ebe ọ bụ na Delhi bụ ọnụ ụzọ ámá nke India na iji dọta ndị njem nleta na-abịa n'obodo ahụ, anyị aghaghị ime mgbanwe n'oge a ma gbanwee atumatu anyị iji mee ka ha nwekwuo nnwere onwe, dị irè na nke kwekọrọ n'ụkpụrụ mba ụwa, yana ogologo oge dị ka ndị steeti ndị ọzọ kwere. .
Ndị otu ahụ nwere olile anya na gọọmentị Delhi ga-enye isi obodo, mmetụta zuru oke na nke mba ụwa iji chekwaa ile ọbịa na njem nlegharị anya.
Dị ka iwu Delhi Govt iwu Mba F.No 10 (39) ENV 2021/4941-4970 dị ụbọchị 13th Nọvemba, 2021, emechiri ụlọ ọrụ gọọmentị Delhi niile ruo Nọvemba 17, yabụ enweghị ike ịchọ nkọwa n'aka ndị ọrụ gọọmentị site n'aka ndị nyere ikike. ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Ekwesịrị ịgbatị ụbọchị nke Nọvemba 17, 2021 maka mmejuputa iwu otu ọnwa maka ụlọ oriri na ọṅụṅụ.